MARKA 4.21-34 F. 4, 7 | Fitandremana Ankadifotsy
MARKA 4.21-34 F. 4, 7
FANOHARANA HANDRAISANA LESONA Jiro.
Rehefa tafiditra ao am-pon’ny mpino ny tenin’Andriamanitra dia manazava ny ao anatiny. I Jesoa Kristy no ilay mazava (Jaona 8.12) miasa sy mandrava ny aizina. Ary rehefa mandray ny Mazava ny olona dia afaka mitsilo sy manazava ny manodidina azy koa (Efesiana 5.8-10).Saingy misy koa ireo karazana jiro tsy mipetraka eny amin’ny toerany ka tsy dia hita izay hilaina Azy (21).
Jesoa Kristy no ilay mpamafy teto antany. Nandeha any an-danitra izy ary nanohy izany ny mpanara-dia Azy. An-dalam-pitomboana ilay voa nafafy ary mitondra vokatra any am-po sy ny saina hatramin’izao. Amin’ny andro farany vao hiverina Izy ary hjinja ny vokatry ny asany (26- 30). Fa mandra-pahatongan’izay aloha dia manaramaso sy mikarakara azy ireo mba hamoa.
Voa faran’izay madinika indrindra ny voantsinapy. Rehefa maniry nefa dia lasa hazo lehibe fialofan’ny voro-manidina (32). Tahak’izany mihitsy ny fanjakan’Andriamanitra, niainga tamin’ny mpianatra 12 niely eraky Jerosalema sy ny manodidina ary nihitatra manerantany (Matio 28.19). Mbola mitohy mitombo mandrak’ankehitriny.
Manana tombony manokana ireo apostoly satria tamin’izy ireo ihany no nohazavaina ny hevitry ny fanoharana (34). Ireo vahoaka nihaino kosa dia samy nandray izay mety ho fahatakarany azy tamin’ny olona (33); fa rehefa nitokana kosa Izy sy ny mpianany, izay vao nohazavainy tamin’ireo mpianany ny zavadrehetra.
Hafatra : Amin’ izay zavatra tiantsika ho fantatra dia afaka mihaino, manoro lalana ary manolo-tsaina antsika i Jesoa! Amin’ny alalan’ny vavaka sy ny famakiana ny teniny no hiresahantsika aminy ary handraisantsika koa ny valiny